ATB coin စျေး - အွန်လိုင်း ATB ပွောငျး
စျေးနှုန်းနှင့် ပွောငျး ကို ATB coin (ATB)
သငျသညျ (ကစျေးနှုန်းအရ) ပွောငျး လိုအပ်နေသောကြောင့်သင်ဒီမှာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကြ ATB coin (ATB) နိုင်ငံခြားငွေကြေးသို့မဟုတ်အွန်လိုင်း cryptocurrencies မှ. ထက်ပိုမိုပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ထက်ပိုမိုလွယ်ကူဘာမှမရှိဘူး 170 ငွေကြေး နှင့် 2500 cryptocurrencies ဤတွင်, အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေး ပွောငျး ကိုသင်အခုလုပ်ကူညီပေးပါမည်။ မရင့်ပြောင်းလဲဖို့အခမဲ့ခံစားရ ATB coin ဒါပေမယ့်လည်းမဆိုအခြားရရှိနိုင်ငွေကြေး။
Market ကဦးထုပ်: $62 499.00
သငျသညျမှာအားလုံးကြည့်ရှုရန်အဘို့အဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါကစိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်လိမ့်မည် လဲလှယ်၏နှုန်းထားများ ATB coin တဦးတည်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်.
ATB coin များ၏စျေးနှုန်းများ ကမ္ဘာ့အဓိကငွေကြေး
ATB coinATB သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာUSD$0.00084ATB coinATB သို့ ယူရိုEUR€0.000713ATB coinATB သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်GBP£0.000644ATB coinATB သို့ ဆွစ် ဖရန့်CHFSFr.0.000767ATB coinATB သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာNOKkr0.00759ATB coinATB သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာDKKkr.0.00531ATB coinATB သို့ ချက်ခိုရိုနာCZKKč0.0188ATB coinATB သို့ ပိုလန်ဇလော့တီPLNzł0.00315ATB coinATB သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာCAD$0.00112ATB coinATB သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာAUD$0.00117ATB coinATB သို့ မက္ကဆီကို ပီဆိုMXNMex$0.0188ATB coinATB သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာHKDHK$0.00651ATB coinATB သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲBRLR$0.00457ATB coinATB သို့ အိန္ဒိယ ရူပီးINR₹0.063ATB coinATB သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီးPKRRe.0.142ATB coinATB သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာSGDS$0.00115ATB coinATB သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာNZD$0.00127ATB coinATB သို့ ထိုင်းဘတ်THB฿0.0262ATB coinATB သို့ တရုတ် ယွမ်CNY¥0.00586ATB coinATB သို့ ဂျပန်ယန်းJPY¥0.089ATB coinATB သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်KRW₩0.999ATB coinATB သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာNGN₦0.325ATB coinATB သို့ ရုရှ ရူဘယ်RUB₽0.0619ATB coinATB သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားUAH₴0.0233
ATB coinATB သို့ BitcoinBTC0.00000007 ATB coinATB သို့ EthereumETH0.000002 ATB coinATB သို့ LitecoinLTC0.00001 ATB coinATB သို့ DigitalCashDASH0.000009 ATB coinATB သို့ MoneroXMR0.000009 ATB coinATB သို့ NxtNXT0.0597 ATB coinATB သို့ Ethereum ClassicETC0.000119 ATB coinATB သို့ DogecoinDOGE0.238 ATB coinATB သို့ ZCashZEC0.000009 ATB coinATB သို့ BitsharesBTS0.0321 ATB coinATB သို့ DigiByteDGB0.029 ATB coinATB သို့ RippleXRP0.00283 ATB coinATB သို့ BitcoinDarkBTCD0.00003 ATB coinATB သို့ PeerCoinPPC0.00278 ATB coinATB သို့ CraigsCoinCRAIG0.375 ATB coinATB သို့ BitstakeXBS0.0351 ATB coinATB သို့ PayCoinXPY0.0144 ATB coinATB သို့ ProsperCoinPRC0.103 ATB coinATB သို့ YbCoinYBC0.0000004 ATB coinATB သို့ DarkKushDANK0.264 ATB coinATB သို့ GiveCoinGIVE1.78 ATB coinATB သို့ KoboCoinKOBO0.184 ATB coinATB သို့ DarkTokenDT0.000774 ATB coinATB သို့ CETUS CoinCETI2.38
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 09 Aug 2020 00:50:02 +0000.